ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ (၁၀. ၅. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(ဂ)-ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ မကျည်းကျွန်း၊ မကျည်းချောင်းဝကျေးရွာ သောက်သုံးရေဖူလုံစွာရရှိရေးအတွက် မကျည်းကျွန်းပေါ်တွင် တစ်ဖက်ပိတ်ဆည်တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ မိုင်းတောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်ခမ်းဆည်ကို RC ကွန်ကရစ်ဖြင့် အပြီးသတ် တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည်‌့မေးခွန်း
(င)-ကျောက်တန်းမြို့နယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့က လုပ်ပိုင်ခွင့်ရယူဆောင်ရွက် နေသော ရေငန်ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှ နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးအမြတ်ရရန် မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-တိုင်းသမအသင်းစုတို့ ဦးစီး၍ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်ကို လယ်သမားများထံသို့ အရစ်ကျရောင်းချခဲ့ရာ အာမခံကာလ နာရီ (၁၀၀၀) မပြည့်မီပင် ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပါသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ စီမံမည်ကိုသိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်